होटल व्यवसायमा ठुलो लगानी भित्रिएको छ, सरकारले पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि नीति निमार्ण गर्न आवश्यक - Artha ko Artha
होटल व्यवसायमा ठुलो लगानी भित्रिएको छ, सरकारले पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि नीति निमार्ण गर्न आवश्यक
फ्रोब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको २०१५का लागि १० उत्कृष्ट गन्तव्य मध्ये नेपाल पनि परेको छ । विशेष गरी नेपालको हिमाल, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा विविध कला संस्कृती अवलोकनका लागि उत्कृष्ट रहेको भन्दै फोव्र्सले नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यको सुचीमा राखेको हो । यसरी उत्कृष्ट गन्तव्यको सुचिमा नेपाल सुचिकृत हुन सफल भए पनि आवश्यक पुर्वाधारको अभावका कारण पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित मात्रामा विकास हुनसकेको छैन । वर्तमान समयमा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था तथा अबका दिनमा यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले तय गर्नपर्ने आवश्यक रणनीतिहरुका बारेमा अर्थको अर्थन्युज डटकम ले नेपाल होटल संघका महासचिव विनायक शाह संग कुराकानी गरेको छ ।
नेपालमा पर्यटन आगमनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
केही वर्ष अगाडी नेपालमा अमेरिकी तथा युरोपेली देशका पर्यटकहरु घुम्न आउँथे । वर्षको केहि निश्चित समयमा मात्र उनीहरु आउने भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा अफ सिजन भन्ने हुन्थ्यो । अहिले नेपाल भित्रने पर्यटकहरु मध्ये धेरै भारतिय र चिनीयाँ रहेकाले अफ सिजनलाई पुर्ति गर्दै आएका छन् । अझै हामी पर्यटन पुर्वाधार विकासमा जोड दियौं भने थप पर्यटकहरु सालभर आउने हुन्छ । सरकारले सन् २०२०मा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सहित प्रस्तुत भएको अवस्थामा त्यसलाई सफल बनाउन सबै आफ्नो ठाँउबाट लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गर्दैछ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्ने क्रम जारी रहेकाले व्यापारी पर्यटकहरुको संख्यामा वृद्धि आउने देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा तारे होटलहरु थपिने क्रम जारी छ । अहिलेको नेपालको होटल व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समयमा नेपालमा तारे होटलहरुमा लगानी गर्नेहरु मध्ये कि विदेशी चेन होटलहरु छन् कि नेपालका ठुला व्यवसायीक घरानाका रहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने उहाँहरु पुर्ण रुपमा अनुसन्धान गरेर होटलहरुमा लगानी गर्दै हुन्ुहुन्छ । एउटै होटलमा अर्बाै लगानी गर्नु को मुख्य कारण नै यस क्षेत्रमा सम्भावना देखेर नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । नेपालमा राजनीतिक परिर्वतनसंगै आर्थिक क्रान्तिका कुराहरु भए अब त्यसलाई मुर्त रुप दिने बेला आएको छ । सबै राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेण्डा भनेकै आर्थिक उन्नति हुन आवश्यक रहेको छ । जसले गर्दा होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै जान्छ ।
पर्यटन प्रबद्र्धन र होटलमा भएको लगानी सुरक्षाको निम्ती होटल संघले के गर्दै आएको छ ?
होटल व्यवसायी बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल पर्यटकिय दृष्टिकोण सस्तो मुलुक हुन पुगेको छ । नेपाली तारे होटलहरुले गुणस्तरमा ध्यान दिएर त्यही अनुसारको मुल्य लिन पर्दछ र दोस्रो कुरा नेपालमा पैसा खर्च गर्न सक्ने गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन पहल गर्नु पर्ने होटल व्यावसायीहरुको अहिलेको पहिलो प्राथमकिता हो ।
नेपालमा होटल व्यावसायको केन्द्रका रुपमा रहेको काठमाडौं, पोखरा र चितवन बाहेकका अन्य स्थानहरुमा पनि होटलहरु खोलिनु पर्छ । त्यसका लागि पुर्वाधार निमार्णको काममा सरकार तात्नु पर्यो । पछिल्लो समयमा सरकारले रारा क्षेत्रमा होटल खोल्नेहरुका लागि विशेष छुट दिने भन्ने योजना जसरी ल्यायो त्यो सकारात्मक छ, त्यसका अलवा त्यहाँको पुर्वाधार निमार्णमा पनि सरकाले जोड दिनु आवश्यक छ ।
पर्यटन विकासमा सरकार र व्यावसायीहरुले के–कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ?
नेपालको पर्यटन विकासमा अग्रणी भुमिका भनेकै निजी क्षेत्रले खेल्दै आएको छ । सरकारले पर्यटन नीतिको तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपुरकका रुपमा अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।